Global Aawaj | चाेलेन्द्रलाई बिदा गर्नुकाे विकल्प छैन : संविधानविद् अधिकारी चाेलेन्द्रलाई बिदा गर्नुकाे विकल्प छैन : संविधानविद् अधिकारी
चाेलेन्द्रलाई बिदा गर्नुकाे विकल्प छैन : संविधानविद् अधिकारी
तस्वीर : प्रा.डा. अधिकारीको फेसबुक वालबाट
नेपाल बार एसोसिएसनले दुई सातादेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएको छ। तर, कुनै हालतमा राजीनामा दिन्न भन्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको अडान छ। बारको आन्दोलन चर्किरहँदा पछिल्ला दिनमा प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा पनि प्रदर्शन सुरु भइसकेका छन्। एउटा विज्ञको रूपमा आन्दोलनको समग्र अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ?
– यो अवस्था आउनु राम्रो त हुँदै होइन । तर, यो अवस्था न बारको कारणले आएको हो, न त सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको कारणले। बारको इतिहासमै कहिल्यै पनि बार यति बलियोसँग आफ्नो कुरा राखेर आन्दोलनमा आएको थिएन। न त सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा अन्य अदालतका न्यायाशीधले यो तहमा सरोकार व्यक्त गरेका थिए।
– काठमाडौं भन्नुस् वा नेपालभर जहाँसुकै, दुइटा कुकुरले पुच्छर हल्लाउँदा पनि रमिते हेरेर ताली पिट्ने मानिसहरू हुन्छन्। हामीले व्यावसायिक, क्षमतावान र विश्वसनीय मानिसहरूका कुरा सुन्नुपर्छ, जो न्याय सेवासँग सम्बद्ध छन्, न्याय क्षेत्रमा कार्यरत छन्।
साँच्चिकै यदि सरकारको संवेदनशीलता या प्रतिपक्षमा त्यो आँट र विश्वास भएको भए, उनीहरूले भनिसक्ने थिए कि प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरौं र यो विषयलाई छलफल हुन दिऔं। जनताका प्रतिनिधिहरूले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ कि देशमा स्वचालित न्यायप्रणाली छ, जसमा सबैको विश्वास छ। त्यसकै लागि त महाअभियोगको अधिकार दिइएको हो। त्यही भएर यो विवादलाई संसद्मा छलफल हुने बाटो कदापि रोक्न मिल्दैन। तर, दलहरूले त्यो बाटो नखोल्ने सुनिश्चित भएपछि आन्दोलन अगाडि बढेको हो।-न्युज कारखाना